राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदान सकियाे : १८ जनाले भाेट हालेनन्, ४ जनाले पाएनन् ! - Naya Patrika
राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदान सकियाे : १८ जनाले भाेट हालेनन्, ४ जनाले पाएनन् !
राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतदान सकिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रदेशभाका ५५० मध्ये ५३६ मतदान गरे जना सांसदले मतदान प्रकृयामा भाग लिएका छन् भने १३ जना सांसद अनुपस्थित रहे । प्रदेश सभाबाट निर्वाचित दीपक मनाङेले भने राष्ट्रिपति निर्वाचनमा मतदान गर्न पाएनन् । उनी ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्धामा सर्वोच्चबा दोषी ठहर भएका थिए ।
रमेश पौडेल, शाुभा शक्या र विराजभक्त श्रेष्ठ
संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)का ३३४ मध्ये ५ जना सांसद अनुपस्थित रहेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागिता नहुनेमा डा. बाबुराम भट्टराई, रेशम चौधरी, जीतेन्द्र नाराणदेव, प्रेम सुवाल र रमेश प्रसाद यादव रहेका छन् ।
त्यस्तै संघीय संसदका ३ जना सांसद (डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पाैडेल) निर्वाचन प्रकृयामा सहभागित हुन पाएनन् । राष्ट्रपतिकाे चुनावी रेसमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र कांग्रेसकी कुमारी लक्ष्मी राई छन् । मतगणना केही बेरमा हुने संसद सचिवालयले जनाएकाे छ ।